China Fish Collagen ifektri abakhiqizi | Yasin
INTO I-QUOTA IZINGA LOKUHLOLA
Powder Uniform noma Granules, Soft, akukho caking
Impuphu emhlophe noma ekhanyayo
10% isixazululo samanzi, 25 25
Ukucinana Kwensimbi (g / ml)
(into yokuguqula 5.79)
I-GB / T 5009.5
I-GB / T 5009.3
I-GB / T 5009.4
I-MeHg (i-methyl mercury)
I-GB / T 5009.17
I-GB / T 5009.11
I-GB / T 5009.12
I-GB / T 5009.15
Ishadi Lokugeleza Lokukhiqizwa Kwe-Fish Collagen
I-collagen yenhlanzi ingamunzwa ngumzimba womuntu, ibambe iqhaza emisebenzini ehlukahlukene yomzimba, futhi ibambe iqhaza ekubambezeleni ukuguga, ekuthuthukiseni isikhumba, ekuvikeleni amathambo namalunga, nasekuthuthukiseni ukungavikeleki komzimba.
Ngokuphepha kwayo okuphezulu entweni eluhlaza, ukuhlanzeka okuphezulu kokuqukethwe kwamaprotheni nokunambitheka okuhle, i-fish collagen isetshenziswa kakhulu ezimbonini eziningi, njengezithako zokudla, imikhiqizo yezokunakekelwa kwempilo, izimonyo, ukudla kwesilwane sasekhaya, imithi yezokwelapha, njll.
1, Ukudla Supplement
IFish Collagen Peptide iyaxhashazwa ngenqubo yokuqhamuka kabusha kwe-enzymatic hydrolysis phezulu kwamangqamuzana nokuletha isisindo samangqamuzana esingaphansi kuka-3000Da ngakho-ke kunika amandla ukumuncwa okulula ngumzimba womuntu. Ukusetshenziswa kwansuku zonke kwe-fish collagen kufakazelwa ukuthi kungumnikelo omkhulu esikhunjeni somuntu ngokwehlisa inqubo yokuguga.
2, Imikhiqizo Yezokunakekelwa Kwezempilo
I-Collagen ibalulekile emzimbeni womuntu, kufaka phakathi ithambo, imisipha, isikhumba, imisipha, njll. I-fish collagen kulula ukuyithatha ngesisindo esiphansi samangqamuzana. Ngakho-ke ingasetshenziswa kwimikhiqizo yokunakekelwa kwezempilo ukwakha umzimba womuntu.
Inqubo yokuguga kwesikhumba inqubo yokulahlekelwa yi-collagen. I-fish collagen ivame ukusetshenziselwa izimonyo ukunciphisa inqubo yokuguga.
Ukuwa kwe-Collagen ngokuvamile kuyimbangela enkulu yezifo ezibulalayo. Njenge-collagen eyinhloko, i-fish collagen nayo ingasetshenziswa embonini yezemithi.
Khipha ku-internet Fish Collagen
Isikali Sezinhlanzi Collagen
I-Hydrolyzed Fish Collagen